ISEMTHETHWENI INGCEBISO LAWYER
Isemthethweni ingcebiso sesinye iifomu ka-lawyer ukumiselwa kwebandla, practicing ukhokelo entsimini ka-jurisprudence.
Ezinjalo ifomu abaqondisi-mthetho umsebenzi yi-ikakhulu concentrated kweli lizwe lethu. Phakathi langaphandle umthetho firms, njengokuba umthetho, akukho purely Lomeluleki. Ezi nkonzo zinikezelwa nge amasebe ka-firms, apho ngaxeshanye kunye Lomeluleki, kukho ezahlukeneyo inkundla izahlulo. Lomeluleki lokucebisa, yenza izivumelwano, nokuchaza isemthethweni imiba abarhwebayo imisebenzi, njengoko-matyala amele abaxhasi kwi-iinkundla banoxanduva kuba matyala uxwebhu, alungise ubungqina kwaye efana nale ngxaki.
Isemthethweni ingcebiso zinika iingcebiso malunga ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka intshukumo ethile imeko kwaye ngoku eligible sebenzisa.
Ngokuqhelekileyo, isemthethweni iinkonzo ingaba chargeable. Noko ke, kwezinye iimeko abo anike free labeling Latin elithi»pro bono». Esi senzo ubani ephambili unikezelo kwi-UK ne-USA. Aseyurophu ukuba omkhulu ngakumbi kangakanani. Kwi-Russia, nangona lokuqala amava ibhekisa, ngoku kusetyenziswa kakhulu limited.
Kwi-bale mihla uphuhliso Internet, ukufikelela Lomeluleki iinkonzo significantly esenziwe lula. Le yindlela malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza a i-elula personal acquaintance kunye umthetho kwaye izimvo kuyo, kwaye yokuba i-inani elandayo umthetho firms inikezela iimpendulo zomthetho imibuzo ngqo ngomsebenzi wabo Internet inkonzo.